ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ရုပ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအလိုလိုကိုတရုတ်လူမျိုးမှအစဉ်အမြဲနှင့်နေရာတိုင်းအတွက်ဖြစ်အုပ်စုကြီးတစ်စု လူ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထီးကျန်လယ်ဘုရင်နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။ သင်မိတ်ဆွေအများကြီးကဒီမှာ၊အလုပ်မှာ၊သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာ၊လမ်းပေါ်မှာဘယ်မှာသင့်အိမ်တည်ရှိပြီး၊အပေါ်လူမှုကွန်ယက်များမှာလူကြိုက်များနှင့်အတူတရုတ်လူငယ်။ သူတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုတူညီသောကြိမ်နှုန်းအဖြစ်ကြသောအခါထိုသူတို့အလုပ်လုပ်ရန်သွားပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေများမဆိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ကောင်းစွာ၊ဟုတ်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်၊စနစ်တကျလုပ္ရန္ေတးဆုိ-မီနူးမှာထိုစာမျက်နှာ၏ထိပ်။ ကိုနှိပ်ပါနိုင်ငံအားလုံးနှင့်ရွေးတရုတ်နိုင်ငံကကျနော်တို့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်စာရင်းထဲကနေ။ မီသင်ဆက်သွယ်ခြင်းစတင်နှင့်အတူမြို့၏အလယ်အဂၤလန္၊မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်အချို့ခေတ်သစ်တရုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များ:၁။ သူတို့အရမ်းကောင်းမှာဆက်သွယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ တစ်ခုချင်းစီဇာတ်ကောင်သည်ထူးခြားသော၊၉၉ ကိစ္စများတွင်၊ဒါကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုခုမဟုတ်ပါခ်င္အကွာအဝေးနှင့်အတူအခြားဇာတ်ကောင်အတွက်ရုပ်ပုံ၊အရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါဘဲ။ သိသင့်သိရှင်းလင်းစွာ။ အသံစကားရပ်များ၏ဇာတ်ကောင်များ၏ဝဏ္ဏ၊အများအပြားအရာများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှကွဲပြားခြားနားသာ ။ အားလုံးအတွက်တရုတ်၊ငါး ကြားနေတန်ချိန်နှင့်လေးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ပင်မပါဘဲသူတို့ကိုယူပြီးအကောင့်သို့အညီသံဆိုလိုနိုင်ပါအထိ ၁၂၀-၁၇၀ ။ တရုတ်ကိုယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးကြောင်း၊ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတူညီသောအရာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသာစကား၊အတိအကျမှီတိုငျအောငျ နားလည်။ ဆက်သွယ်သည့်အခါအခြားဘာသာစကား၊ဤအဂၤါ၏မိန့်ခွန်းတလဲလဲနိုင်ပါသည်။ ၂။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များအတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားတရုတ်လူတစ်ဦးသည်ထောက်ပံ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်မည်သည့်အခြေအနေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သငျသညျမပွုနိုငျအရာအားလုံးကို။ ပညာတတ်တရုတ်လူမျိုးနှင့်ချင်သူတွေကျေးဇူးပြုပြီးသူတို့ရဲ့ အမြဲပြုံး။ အားလုံးအခြားသူများအဖြစ်၊သူလိုလား။ သင်ကထွက်စစ်ဆေးချင်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်။ ၃။ တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်အထူးသဖြင့်မှန်သည်၊ဒါပေမယ့်ဖို့လိုပါလျှင်ယခုသူလာစကားပြောမီငါးမိနစ်။ ၄။ တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊အရာရာစိုး၏။ ဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါကြောင်းတရုတ်လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မည်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကြီးမားသောအရေအ ။ မိန်းကလေးများအဘို့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင်၊ဤအပြုအမူမဟုတ်အမှားတစ်ခုခုစဉ်းစား:သင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ရှိသည် တရုတ်အမျိုးသမီးရှိသည်ပါဘူးတဲ့ခင်ပွန်းသည်အပေါ်ဘက်ကမ်းကိုနိုင်ငံ၊နှင့်ရက်စွဲမှာအနည်းဆုံးအနည်းငယ်ယောက်ျားတွေတချိန်တည်းမှာပင်။ ၅။ တရုတ်ကစားတဲ့နိုင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းစကားပြော၊နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ပိုပြီးအထူးသဖြင့်၊အတည်ပြုမရှိခြင်း။ တရုတ်မဖက်ရှင်အတြက္ဦး။ အများစုကအဝတ်အထည်အတွက်နိုင်ငံပိုင်အမျိုးအစားများညွှတ်။ အဟောင်းတွေကလူတွေဝတ်ဆင်တူညီသောအရာအဖြစ်လူငယ်နှစ်ဦးကလူ။ အဆင့်အတန်းများအလှအဖြစ်စဉ်းစားသည်အဖြူအသားအရေ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူစတိုင်အနိဗ္ဗာန်:အမျိုးသားများအတွက်၊တရုတ်ပြည်သူ့မှုတ်မိမိတို့နှာခေါင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်စင်ကြယ်။ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်းဘဲ၊နု-အနေနဲ့လဲလှယ်၏အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အအေးဆေးလေထု၏။ သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပျင်း။ ဆိုပါကယခင်ပီမသဘောတူပေါ်ရွှေ့ဖို့အနောက်နှင့်ဆက်လက်ဆက်သွယ်နှင့်အတူအဓိကဇာတ်ကောင်။ ဆက်သွယ်ရေးကြားလူအဖြစ်ရွေ့လျားအပိုအင်တာနက်-ဒီရည်မှန်းချက်အဖြစ်မှန်။ နှင့်ကစားတဲ့ ၂၄ နာရီချက်တင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခြားအမည်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင် ၂၄သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးကိရိယာမှာဒီဂိမ်း၏။ အဖြစ်မှန်။ စေမယ့်သူ့ကိုပြောပြကြွင်းသောအရာမှမိမိကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကို- ၂၁ အသက်အနှစ်၊ငါအားလုံးအတွက်အသေးစိတ်အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်ဤအတွက်၊သင် ၁၈ အသက်အနှစ်နှင့်နန်းတစ်စောင်ကို၊သို့မဟုတ်မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေချင်ငါ့အတွေ့ကြုံများ၏အဝတ်အစကနေကျွန်မအတွက်ဗစ်၊သူမအပြုအရာအားလုံးအဖြစ်ကတိထား၊ဆောင်ခဲ့ပြန်ဖို့သူမ၏ခင်ပွန်းအတွက်မိသားစု။သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်၊သောအကောင်းဆုံးအချိန်၊နေ့၊ကျွန်မရယ်၊ပျော်စရာ၊အားကစား ၂၇-နှစ်အရွယ်။ ၁၈၂ ၇၈ ၁၉ စေပါလိမ့်မယ်သင်ရှည်လျားနှင့် ၊ငါစောင့်ရှောက်မည်အားလုံးအကြံပြုချက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှာသင့်တောင်းဆိုချက်နှင့်အပြန်အလှန်စာနာ။ လူအပေါ်ကိုယ်တော်၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်၌ငါ၏အကား။ အားလုံးတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြတင်းကျပ်စွာလျှို့ဝှက်ခြင်း၊စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာကာလအတွင်းသင့်ရဲ့အခမဲ့အလိုတော်နှင့်၏အသွင်အပြင်စာနာအစည်းအဝေးရှိနိုင်ပါသည်ပုံမှန်။ ရီးရဲလ်ဓါတ်ပုံများကြောင်းငါအမြဲပစ်ပယ်။ ရေးသားဖို့
ယခု၊အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊အများအပြားရှိပါတယ်သစ်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊အရာတဖြစ်ပါသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုများလိင်ချက်တင်။ ဒါဟာအကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်အတွက်အ နိုင်ငံများနှင့်အတူလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုယခုအရမ်းဘက်လိုက်တယ်။ ၏သင်တန်း၊ထိုအပြုသဘောအပြောင်းအလဲအတွက်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။၊ဒါပေမယ့်ခွဲခြားဆက်ဆံနေတုန်းပဲ။ ေဆက်ဆံရုရှားအတွက်၊ဘီလာရုစ်၊ယူကရိန်း၊ကာဇက်စတန်နှင့်အခြား နိုင်ငံများ၊အဆိုပါပြဿနာများ၏ဆက်သွယ်ရေးအလွန်သက်ဆိုင်ရာအမှန်၊ကလပ်အသင်းနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းထားရှိရေးကလူများနှင့်အတူအလွန်အနည်းငယ်ခြော့၊သူတို့သည်လက်တွေ့ပီးသိကၡာရွိေသာမြို့ကြီးများအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့လိင်ချက်တင်ကစားတဲ့ထောက်ပံ့သူများနှင့်အတူပြည့်စုံအပ္သည္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုသင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများလုံးတိုက်ကြီးအပေါ်၊ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လျှင်အဘယ်သူသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိပါတယ်၊တူညီသောလိင်ဦးစားပေးနှင့်အတူသင်သာ မြို့နှင့်နိုင်ငံ၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်။ နှင့်ဤအလှည့်တွင်၊သင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ထို့အပြားအနောက်နိုင်ငံများတွင်၊လိင်တူဆက်ဆံသူတွေအများကြီးပိုပြီးမြောက်မြားစွာသော၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့မှမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိပါတယ်ထက်။ အခုတော့အကြောင်းပြောရအောင်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်ဆိုက်အလုပ်လုပ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ကျနော်တို့မလုပ်မည်သည့်အဖိုးအခ။ အဖြစ်အသုံးပြုရန်သင်လိုချင်သလောက်။ ကျနော်တို့မည်သည့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်၊ကိုယ့်သွားဖို့အဓိကအစာမျက်နှာနှင့်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ထိုအခါပေးမှခွင့်ပြုချက်သင့်ကွန်ပျူတာမှကမ်မိုက်။ သင်လုပ်မပေးနိုငျ၊ထိုအခါမူကားရဲ့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူအတော်များများချင်ပါလိမ့်မယ်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့သင်ရှာဖွေနေစဉ်မှာအသံတိတ်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်။ အခြားအရာအားပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုက။ ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်စတင်ရောက်ရှိဖို့အတွက်သင်ကျပန်းနိုင်ရန်အတူကြသူသုံးစွဲသူများအတွက်လောလောဆယ်တွင်။ သင်ဆက်သွယ်ရေးကန့်သတ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအပေါ်ခလုတ်ကိုဘယ်ဘက်အောက်တိုင်းပြည်အခန္းဆွေးနွေးချင်နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်။ ကျွန်တော်မကြိုက်ကြဘူးသောသူကိုရွေးချယ်ကျွန်ုပ်တို့၏။ နောက်ပြီးအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်သင်သည်အခြားတစုံတယောက် အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့၊စိတ်အပိုင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်မည်သို့အသုံးပွုနိုငျအခမဲ့လိင်ချက်တင်အက္ပ္ကို။ လုံလောက်အောင်ပြောရန်အကြောင်းမရှိခလုတ်ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုသင်နှိပ်နိုင်သည်အပေါ်ပြသရန်အသုံးပြုသူများနှင့်အတူမှန်ကန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ ဤရည်ရွယ်ချက်အပေါ်၊ဒါကြောင့်မရှိခဲ့ပါက္လွသို့မဟုတ်ကဲ့ရဲ့၊တကယ်တော့၊နှိပ်ခလုတ်ကိုနိုင်ဘာမှလုပ်။ ထို့အပြင်၊ဒါ့အဝင်အားလုံးနီးပါးကိုအခြားလိင်ဗီဒီယိုစကားပြောဆော့ဝဲများအတွက်လိင်၊အတူသူတို့ကိုထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့အဘို့။ သင်သာရှာတွေ့သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏သင်တန်းတွင်ဆက်သွယ်ရေး။ ကျွန်တော်လည်းချင်ပါတယ်ကိုသင်တို့အားသတိပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ဆက်သွယ်ရေး။ မစင်ကြယ်သောအပြုအမူသည်မဖြစ်နိုင်။ ဒီအတွက်၊သင်ပိတ်ပင်ခဲ့လိမ့်မည်များအတွက်အချို့သောအချိန်သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုသေလေးစားရန်သင့် ။ ရုရှားချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့က်ားရွေးချယ်ခြင်း၊ကလွယ်ကူပြီးလုံးဝကိုအခမဲ့။ သင္၏ကမ်လိုကမ္ဘာ့အချက်ဆက်သွယ်ရေး။ ရပ္နားရန္ေနချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ကမ်းလှမ်း၎င်း၏ဧည့်သည်များလွယ်ကူခြင်း၊အေးဆေးနှင့်လျှော့ပေါ့ဆက်သွယ်ရေး၊အသစ်အစည်းအဝေးများ၊တစ်ပင်လယ်၏သာယာသောခံစားချက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊လင်းနှင့်အ ဆန္ဒစားႏိုင္ပါ၏ခံစားချက်အသစ်အစည်းအဝေးထပ်ကာထပ်ကာ။
မိသားစုအမြို့မြို့ပေါ်တယ်ကမ်းလှမ်းဒေသခံများ၏မှတ်ပုံတင်ရန်သူတို့၏ပရိုဖိုင်တွင်ချိန်းတွေ့အပိုင်း။ ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေမြို့မှ၊သငျသညျမတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေနှင့်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်။ သင်တို့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈ အသက်အနှစ်ရှာချင်တယ်မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ-ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳမိသားစု။ အဲလစ်၊သင်ရုံကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော။ အမြဲတမ်းနေထိုင်အတူပျော်ရွှင်စရာနှင့်ချို။ မော်ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်အသုံးပြုသူ၏ ။ ကောင်း၏အချိန်။ သင်သည်အကိုက်ညီဆုံး။ ကဗျာကောင်းပါတယ်။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊နှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပါယ်ကို။ ကံကောင်းပါစေ။ မော်ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင် ။ ကောင်း၏အချိန်။ ဤသည်လျှင်သင့်ရဲ့ပုံရိပ်ကို။ ထိုအခါငါမြင်ချင်သောသင်ရုံအံ့သြဖွယ်။ မော်ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်အသုံးပြုသူရဲ့အသုံးပြုပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်သာရှိပါတယ်လျှင်တက်ကြွစွာလင့်များအပေါ်မြို့ပေါ်တယ်မြို့၏မိသားစု။
သူငယ်ချင်းတွေငျး၊ငါဂရုမစိုက်ပါဘူးမည်မျှသင်၊သင်ဘယ်မှာနေတယ်၊ဘယ်က်ားသင်ရှိသည်ပိုပြီးပြီ ၁၃၊ငါအသက်ရှင်၏မြို့အတွက် လျှင်၊သင်၌စိတ်ဝင်စားကြဤအလုပ်၊ငါ့အမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်၊သူတို့ပြောသကဲ့သို့ငါသည်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသူငယ်ချင်းများမှဖန်တီးမဟုတ်သော-သာမန်မိသားစုအျပင္ဘက္။ လင်နှင့်မယားနှစ်ဦး။ ငါအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်နေ့က၊ဒေသခံတစ်ဦး။ ဟိုတယ်ရဲ့အသေးစားကမ်းခြေနှင့်နီးစပ်သည်။ ကျွန်မဟာချစ်စရာ၊ငါဖို့ဘယ်လိုသိ။ ဂရုစိုက်၎င်း၏အကာအကွယ်။ နေသောမြို့အရေးမပါဘူးဒါကြောင့်အရေးမပါဘူးဘယ်အရာကိုမျှလည်းမရှိ။ ငါ၏စောင့်ရှောက်မှုယူဒီအစဉ်အမြဲ။ ဒီမပါတဲ့ဟာသ။ တော်တော်အလေးအနက်။ အဆိုပါသုံးပြီး၌နေထိုင် ။ အဘယ်သူမျှမအမြတ်အစွန်းရည်မှန်းချက်များ။ နှင့်ဤအမျိုးအစားမိသားစုတစ်ခုဖန်တီးရန်စာတစ်စောင်မှာမွန်း။
အားလုံးအချက်အလက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်စုဆောင်းနေဖြင့်ပွင့်လင်းနှင့်အများပြည်သူဒေတာအတွက်လူမှုကွန်ယက်ဇြန္လဲ့ေ။ အဆိုပါစီမံကိန်းများပါဝင်သည်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်လူကြိုက်များသောရေးသားချက်များမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ဆိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ၊တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်။ အားလုံးအချက်အလက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်စုဆောင်းနေဖြင့်ပွင့်လင်းနှင့်အများပြည်သူအချက်အလက်များကိုလူမှုကွန်ယက်ဇြန္လဲ့ေ။ အဆိုပါစီမံကိန်းများပါဝင်သည်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်လူကြိုက်များ၏စာမျက်နှာများမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ဆိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ၊တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်။
ထိုအခါအမှန်တရားအကြောင်းသင်အတွက်အသက်ရှင် ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ပြောချင် နှင့်အတူတစ်ဦးချစ်စရာကိုးရီးယားသား။ ကောင်းစွာ၊အဘယ်သူသည်ချင်ပါဘူး၊ကျွန်တော်လည်းလိုသည့်အခါကျွန်မနေထိုင်ခဲ့ၼရုစ္။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်အဆင်သင့်၊စကားပြော၊နှင့်အဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့မှ၊ဒီကင္မ္ခ်ီ၊အများဆုံးမေးခွန်းများကို၊ကောင်းပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်မေးခွန်းတွေကိုအပိုင်းတွင်၊လေထုများ၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကိုဘယ်လိုအလာကိုရီးယား၊အဘယ်ကြောင့် ၅၀ ကျော်စေလွှတ်ရန်မည်သို့ဖြည့်ဆည်းကိုရီးယား၊နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏တူညီသောမေးခွန်းတစ်ခု၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခြားမည္။ ကျွန်တော်တောင်မထင်ကြောင်းဤအကြောင်းအရာနေဆဲသက်ဆိုင်ရာ၊ငါပေးမည် ၃ ကေးရှင်းမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်၊သင်တိုက်ရိုက်ကိုးရီးယား။ ငါသည်သင်တို့ကိုသတိပေး၊ဂရုမသိမ်း၊ကိုရီးယားမှာလည်းအလုပ်မဖြစ်အံ့၊အသုံးချလိမ့်မည်ကိုးရီးယား၊ဒါပေမယ့်မည်မျှယားတစ်ဦးတစ်၊ဟုတ်ကဲ့၊ပင်တစ်နေရာတည်းတွင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေရေးအတွက်ဘားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးကိုရီးယားဘာသာ၊ကောင်လေး၊ကင်မ်နှင့်သင်၏ထွက်လဲကျ ၁၀၀။၅၀၀၊လူငယ်ငယ်နှင့်၊ဆိုးလ်နှင့်ခ်န္ဂင္၊ရှေးခယျြမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ငါ၊ယခုအထိ၊အထောက်အပံ့မင်ရင်းနှီးနှင့်အတူလူတွေကြောင်းတွေ့ရှိခြင်းနှင့် ငါလုပ်ခဲ့တဲ့၊နှင့်တကယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းငါ့အလိုရှိသမျှအလုပ္ရွာေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အချစ်နှင့်ငါကြီးမားတဲ့အချစ်သောသူတို့စိတ်ဝင်စားမဟုတ်၊ငါအကြံပြု။
ရီကနေတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းကင္မရာမ်ား၏စန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂိုကမ်၊အွန်လိုင်း၊ဥတု၊ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတင်းကနေစန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂို၊မြို့တော်၏ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေး။ အဆိုပါမြို့တော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ကိပ်ႏ မှ၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အထိ ၁၅၀၂အသစ်ပြောင်၊၁၉၃၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁။ လူဦးရေ၏စန်တိုဒိုမင်ဂိုရောက်ရှိတစ်သန်း။ ရီကနေတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းကင္မရာမ်ား၏စန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂိုကမ်၊အွန်လိုင်း၊ဥတု၊ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတင်းကနေစန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂို၊မြို့တော်၏ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေး။ အဆိုပါမြို့တော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ကိပ်ႏ မှ၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အထိ ၁၅၀၂အသစ်ပြောင်၊၁၉၃၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁။ လူဦးရေ၏စန်တိုဒိုမင်ဂိုရောက်ရှိတစ်သန်း။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်များစွာသောအခြားသူများအလိုရှိသောကတ်။ ငါရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖောက်သည်များ၊နှင့်အတူနောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲအတွက်ကဒ်ကိုလက်ခံရရှိ။ မြေပုံအခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲရတဲ့အရ၊သို့သော်၊သင်အရှိန်မြှင့်၏နယ်စပ်ဖြတ်ကနေတဆင့်အထူးအလိုင်းစင်္ကြံ၊အလက်ရှိမြေပုံလိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ခရီးသွားလာ၊သို့မဟုတ်အထမ်းများရထား၊ေင္တာမ်ိဳး။ စင်ကာပူတွင်၊သင်တို့အတွက်တက်လက်မှတ်ထိုးမကြာခဏခရီးသွားအစီအစဉ်အပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူပ်သည့်အခါတင်ပြသည့်ပက်ကဒ်မှာအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းချက်။ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်အပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါအဇာနှစ်နိုင်ငံစလုံးအဇာ။ ငါဒီကဒ်အတွက်နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ နှင့်ရှိပြီးသားမှစီမံခန့်ခွဲရောက်ဂျပန်၊စင်ကာပူ၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်းနိုင်ငံသို့၊တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဟောင်ကောင်အဇာ။ သူဟာအမြန်ဆုံးပျံသန်းဖို့နယူးဇီလန်နှင့်ဩစတြေးလျအဇာ။.
သစ်တစ်ခုဆောင်ပုဒ်သာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအမြစ်အစိတ်အပိုင်း။ ယခုမွစတင္၍ပြင်အိပ္ခ။ အတွက်ကြီးကြပ်မှု၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုအစီအစဉ်၏အစီရင်ခံ နှုတ်ခွန်းဆက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအကြပ်အခွေအသစ်အဗားရှင်းအစီအစဉ်၏၊ယခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါအစီအစဉ်နာ့့နှမ်းတစ်ခွေ နှုတ်ခွန်းဆက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအကြပ်။ ဒီအသင့်အတွက်။ အသောသူတို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊လူငယ်တစ်ဦးသည်လူ၊ကျွန်တော်ကစပ်စုပါ။ ဤသည်၏တစ်ဦးစကားလက်ဆုံ၏အစိတ်အဘို့အသောသူအတူပျင်းသောအထီးကျန်။ ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူသွားလာရန်ပေါ့ပါး။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်လုံးဝအမည်မသိ။ ရွေးချယ်အမည်ပြောင်လျှင်အဖြစ်လူသိများကြသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်၊ဆေ့အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းအရေအတွက်ကို။ ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုပါ။ နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်။ ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်သို့မဟုတ်နှစ်သက်ခြားအသုံးပြုသူများ။ အပေါ်အခြေခံပြီးဒီဒေတာကို၊အမည်ရှာဖွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ၏ညီမျှပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်ကိုလည်းရှိပါတယ်လက္စြဲထိန်းချုပ်သုံးပြုသူအပြုအမူ။ အဆိုပါချိုးဖောက်ရာဖြစ်စေခြင်းငှါယာယီ ။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်။ အားလုံးအတွက်ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံ၊ကိုတားမြစ်ကြောင်းအရာကဆန့်ကျင်ဖို့ကျင့်ဝတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ။ အထူးသဖြင့်၊ထိုပစ္စည်းသည်ကာမဂုဏ်နှင့်လစ္၊မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ဒါကြောင့်လည်းပယ်ဖျက်ပေါ်မှာယာယီဖိုင်တွေမျက်နှာပြင်၊ဖိုင်မန်နေဂျာ။တက်ကြွသန့်ရှင်းရေး။ လည်းပြသဝှက်ထားတဲ့ဖိုင်တွေ။.
ဝေးအားဖြင့်၊အများဆုံးရေပန်းစားရုရှားကစားတဲ့ဂိမ်း။ နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတည်ပြုချက် မိုလ်သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်နေ့တိုင်းအား ၂၀၀ ခန့်လူဦးရေသန်း။ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအတူကျော်ကြားသူတစ်ဦး:ငယ္လည္း ၊တို့၊၊ နှင့်ျဖင့္အခြားဘလော့ဂါများရေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုများအတွက်ချက်တင်ကစားတဲ့မိတ်ဆက်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ။ ကစားတဲ့စကားပြော၊သင်လစ်စလစ်အတွက်၊ နှင့်စော်၏အပေါင်းအဘော်၊ဒါမှမဟုတ်သင်အလွန်အလျင်အမြန်နှင်အိပ္ခ။ သတိရ:ပေးဆောင်။ ကစားတဲ့စကားပြောခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးသမိုင်းအတွက်၊ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့မျှော်နေစဉ်ဆက်သွယ်ရေးဌာန။ အတွက်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးလအတွက်စစ်ဆင်ရေးကြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်လူသန်း ၁၅၀။ ယခုရှိပါတယ် ၂၀ သန်းလူတွေအွန်လိုင်းနေ့တိုင်း၊ထိုသို့လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေရှာဖွေရန်သစ်တစ်ခုဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်အကျိုးစီးပွား၏အ ။ သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ရှိပါတယ်သငျသညျရှေးခယျြနိုငျမသာမိန်းကလေးများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူသီးသန့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏အမျှလိင်။ အခြားကြောင်မပေးနိုငျသင်သည်ဤရွေးချယ်မှုအဖြစ်၊မကြာခဏအရေအတွက်၏ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်စကားပြောခြင်းနဲ့မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မသာကြောင်း၊ ဒီလိုလုပ်ဖို့။ ရွေးချယ်ကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားအဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်ကျောင်းအတွက်ရုရှားကနေအကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့သည်။ ပြီးနောက်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတက်ရောက်ခြင်းတိုးမြှင့်ဖို့လူပေါင်း ၁ သန်း။ ပြီးနောက်စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုဆိုက်ရဲ့အမႈမ်ားနှင့်အမျိုးမျိုးသော ပေါ်လာမှအစပြုခဲ့သည်။ အရတည်ဆောက်ရေးအတွက် ၂၀၁၀၊သန်းကိုဧည့်ခဲ့ကြ၊နှင့်နေ့တိုင်းထုတ်လုပ်ခွန်ဝန်နှင့်အတူ ၁၊၀၀၀ ကြော်ငြာတွေ။ လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်၊သာ ၅-၁၀ ထောင်အွန်လိုင်းလူတွေအတွက်စကားပြော၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသင်တွေ့ဆုံရန်လူတစ်ဦး၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ကမ္ဘာ့အလေ့အကျင့်၏ဗမာနှင့်ပဲပျော်စရာရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးအခါဇါခ်ကစားတဲ့ဂိမ်းဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်ဝှက်အားလုံးအပေါ်အကြောင်းအရာ။ ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေမှဇက်ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်ဖို့အချိန်သွား။ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဇါခ်အာမခံတွေအများကြီးရောက်စေ၏။ လေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်သင်အဇါခ်၊သင်သုံးနိုင်သည်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဗီဒီယိုစကားပြောတင်ပြအပေါ်အဓိကနှိုးဆှဆိုဒ်များ၊ဒါကြောင့်ပရိသတ်အပေါ်မှာအတွေ့အညီ။ အဓိကအသုံးပြုသူများအတူဆက်ဆံသူအမျိုးသား၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံအဖြစ်ကဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ဆက်ဆံ။ သင်ဆက်ဆက်လူမှုရေးရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ပေါင်းသင်းနှင့်အသိပညာနှင့်အတူလူငယ်မိန်းကလေးများ။ ဒါ့အပြင်၊သငျသညျမဖြစ်သင့်ဆိုဒ်ကိုအလည်သွားမည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင် ၁၈ အသက်အနှစ်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်လိင်ချက်တင်ကစားတဲ့၊ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အစုံလင်သော။ အတွက်စကားပြောနေ့တိုင်းအွန်လိုင်း၊ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လူတို့အဘို့ရှာကြသည်။ မ ၁၈ အသက်အနှစ်။ ကြိုးစားပြီးတော့ရုရှား။ အတွက်ကျပန်းဘာသာျပန္ခ်က္၏။ ဒီဘာသာျပန္ခ်က္တိတိကျကျဖော်ပြထား၏အနှစ်စကားပြော:နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရန်၊သင်ရရန်စတင်သိမ်းသွားခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကိုကျပန်းအဖော်။ သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအဆိုပါနိုင်ငံ၏ နှင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သုံးစွဲသူများနှင့်အတူရုရှားထံမှ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောပြရန်-ဗမာအပြောအသုံးပြုသူများကိုရွေးချယ်ပါ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်အယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ နွေရာသီကျော်၏၂၀၁၅၊ချက်တင်ကစားတဲ့၊ကျပန်းစကားပြောသိသိသာသာလုပ်ခရီးစဉ်အပေါင်းတို့၏-လူသိများချက်တင်။ ပြင်သစ်ကမဖယ်မျှော်စင်မျှော်စင်နှင့်အချစ်လမ်းလျှောက်၊ဒါပေမယ့်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒါဟာတီထွင်ခဲ့သည် ၂၀၁၁၊အလျင်အမြန်ခေါ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ပရိတ်သတ်။ ထိုကတည်းက၊ကွန်ရက်စာမျက်နှာမပြောင်းလဲ၎င်း၏ဒီဇိုင်း၊သို့သော်ဤမထိခိုက်အဆင်ပြေဆက်သွယ်ရေး၏။ ဒီနေရာမှာအနိုင်ကျင့်ပင္သစ္စာ၊ဘာသာစကားကိုမသိကြဘူး၊သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအနည်းငယ်စကားများအတွက်အလိပ်။ လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရုရှားဇိုင်နာ၊နေဆဲလူကြိုက်များချက်တင်ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်၊အရန်ရုရှားဗားရှင်း။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဒေသခံများနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားအပြောအသုံးပြုသူများ။ အကစားတဲ့အင်္ဂါလည်း။ အခက်အကြောင်းပြောဆိုရန်အလူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်ထဲမှာစကားပြော၊သို့သော်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်အစွန်းမရောက်၊ဒါကြောင့်သင်မည်မဟုတ်ဘာမှမမြင်မစင်ကြယ်သော။ ဒီကာကွယ်တားဆီးဖို့၊သင်ကမချိုးဖောက်ပါ။ အခြားအမေရိကန်ဗီဒီယိုချက်တင်။ နာမည်ပေးပို့ရန်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်။ အမွတ္ညှင်း၊ဒါကြောင့်သတိပြုရကြမည်:သင်မည်သူမဆိုတွေ့ဆုံရန်နှင့်အရာအားလုံးနှင့်အပြီးယောက်ျားအတွက်မြင်းမျက်နှာဖုံး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကအရမ်းလူကြိုက်များပြည်ပမှာ၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုမှုရှိသင့်၊အများအားဖြင့်ဖြစ်။ ဂ်ာဗီဒီယိုချက်တင်ကနေ တူညီသောစာရေးသူပါ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတူအကျွမ်းတဝင်မွတ္ထားနှင့်ဖြည့်ညှင်း။ အများစုဟာအသုံးပြုသူများ။ သငျသညျကိုအသုံးပွုနိုငျဂျာမန် အဖြစ်။ အမှန်စင်စစ်၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူဘာသာစကားအထောက်အပံ့သည်မကြာခဏအားလုံး၏အကောင်းဆုံး။ ပင်အတွက်ဗီဒီယို၊အပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများအသေး၊သင်မူကား၊ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြော။ ကစားတဲ့ပေါ်သည်ထင်ရှားအတော်လေးမကြာသေးမီက၊သို့သော်အတွက်စာရင်းသွင်းခဲ့ကြယူမှအကောင့်သို့ရှိသမျှတို့သည်ယခင်အမှားနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖန်တီးအတော်လေးအလွယ်တကူအသုံးပြု။။။။။။ အချက်တင်ရှိသည်ပါဘူးရုရှားဗားရှင်း၊ဒါကြောင့်သင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာဆက်သွယ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အချက်တင်ပေးသင်ပြောပြရန်အစိမ်းအတွက်၊လမ်းကြောင်းမှန်။ ကျွန်တော်တို့ပြောရလိမ့်မယ်လုံးဝရုရှားနွေးချက်တင်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုအပေါ်ပူနွေးနွေရာသီညနေခင်း၊မရှိပေမယ့်ကြသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအများအပြားအတွက်၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနေမပါဘဲ ။ အဆိုပါဗီဒီယိုမစိ၊ဒါကြောင့်သတိပြုရကြမည်နှင့်အထားအပေါ်ခလုတ်ကို။ စပိန်ချက်တင်ကစားတဲ့အသံ၊သူ့အဘို့တဖန်အဇိုင်းများ၊သို့သော်ဤဆင်တူအဆုံးသတ် ဆက်သွယ်ရေးသည်အများအားဖြင့်စပိန်အတွက်။ ဗီဒီယိုအတွက်၊သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်အနေဖြင့်ဘာစီလိုနာသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှရစ်။ သင်ကရန်မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ကမ်သို့မဟုတ်မိုက်မှာပါ။ ရိုင်းချက်တင်ရုရှားစာသားမှာစကားပြော၊သို့သော်၊ဒါဟာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်။ သင်မမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောဖို့၊ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုချက်တင်၊ကိုထည့်သွင်းပေးပို့ဖို့နိုင်စွမ်းဓာတ်ပုံများ၊နှင့်ယခု၊အမှုအတွက်အပြန်အလှန်စာနာ၊သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်သင်၏ဓာတ်ပုံမှ ။ ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်မပါဘဲတစ်ဦးကမ်၊သင်ဆဲတတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုအားလုံးအတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောဆိုချက်။ အလွန်ကြီးစွာသောအမည်မသိအသံချက်တင်အဖြေ။ ဒီမှာရှိသည်ပင်လျှင်ကောင်းမည်၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို၊ကြောင့်၏အနှစ်သာရဆွေးနွေးအသံ။ ကြိုးစားရန်စိတ်ဝင်စားမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတယောက်တည်းသူမ၏စကားသံကို။ ဆက်သွယ်ရေးကနေ၊သင်စိတ်ပိုင်းဆက်စပ် အဖြစ်၊ဤသည်ကျိန်းသေသည်စုံလင်သောအသံစကားပြောသောသူတို့အဘို့အတွန့်ဆုတ်သိမှရရန်အသီးအသီးအခြား၊ဒါကြောင့်စကားပြောလုံးဝအမည်မသိနှင့်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊မမြင်အရင်းအမြစ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအဆိုပါကွန်ရက်အရေအတွက်အနည်းငယ်သာလူများကို၁၀၀၊ဒီဟာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ သင်ပင်သတိထားမိမည်မဟုတ်ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့တစ်နာရီ။ သငျသညျပေးဆောင်ချင်ပါသည်။ ဤအမှုမဖြစ်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစုဝေးအပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့ဗီဒီယို။ ကိစ္စရပ်ဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းငွေပေးချေမှုများအဖို့လက်လှမ်းအားလုံး။ အားလုံးဗီဒီယိုချက်တင်ကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ အပြင်၊အားလုံးကိုဗီဒီယိုချက်တင်ပေးဆိုက်ပေါ်တွင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်၊အသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများမှာအသစ်မဟုတ်ပါ၊ကောင်းစွာ၊၏တစ်ဝက်ကမ္ဘာအလုပ်များအတွက်အခြား၊နှင့်များစွာသောအရအသိအသီးအသီးအခြား။ လုံးဝအသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့နည်းလမ်းမိန်းကလေးတစ်ဦး။နိဒါန်းမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောနိုင်ပါတယ်မည်သူမဆိုတွေ့ဆုံရန်၊ဘယ်နေရာမှာမဆို။ဒီအတွက်ဓာတ်၏အံ့၊လူအတော်များများချစ်သူချက်တင်ကစားတဲ့။ အဓိကအချက်များ၏အသက်ရှင်သောချက်တင်:ဗီဒီယိုစကားပြောအလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အခရီးနီးပါးမည်သည့်ထောင့်ကမ္ဘာ၏၊လေ့လာတစ်ခုခုအသစ်အရ၊ကျွမ်းနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှု၏အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်အတွက်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ အများကြီးရှိပါတယ်ဗီဒီယိုများ၊အချို့တို့ကိုလက်တွေ့ကျပြီးအသုံးဝင်သည်၊အချို့သောမဟုတ်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အားလုံးကိုစုဆောင်းဖို့အကောင်းဆုံးအဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်မှာတယောက်။ တဦးတည်းကိုနှိပ်ပါ၊သင်အပြောင်းအကြားဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်များကိုအကောင်းဆုံးသူမြား။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ဗီဒီယိုကနေရုရှားနိုင်ငံ၊ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ဘီလာရုစ်၊ဂျာမနီက၊ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊အမေရိကန်နိုင်ငံ၊စပိန်နိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ အားလုံးစကားပြောဆိုချက်တွေကိုပိုင်အကြီးဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်အုပ်စု၊သည့်ထက်ပို ၄၅၊၀၀၀။ နေ့တိုင်းကျွန်တော်ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ထည့်သွင်းခြင်း၊ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယိုများ၊ဓါတ်ပုံများနှင့်ရန်ပိုပျော်စရာနှင့်အတူစကားပြော။ ထိုအုပ်စုထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အများအပြားအဆင်းလှသော၏ဓါတ္ပံု၊ဗီဒီယိုစကားပြော။.
အိန္ဒိယသည်ပုခက်၊စွန်ပလွံစာဖတ်ခြင်း၊စစ်တုရင်နှင့်အမှန်တကယ်ရော။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ကလေးတိုင်းပထမဆုံးသိအမျိုးဖြစ်နှင့်စာနာ။ သင့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦးသည်ဟိန္ဒူ၊သူအတွက်ကူညီပေးပါမည်ခက်ခဲကြိမ်။ ငါ၏အိပ်မက်လေးတစ်ဦးအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်။ တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်အဖော်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အိန္ဒိယအတွက်၊သင်မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။ ဒါဟာကြာအချိန်တစ်နိမ့်ဆုံးနှင့်မလိုအပ်ပါဘူးမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ဖြဖြေပေးတော်မူမည်၊သင်အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်မှအခြားရွေးစရာ။ ဤသင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ဖန်တီးရန်အသိ၊အမြင်အသုံးပြုသူများ'ဓာတ်ပုံပြခန်း၊မှတ်ချက်များထားခဲ့၊ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊စသည်တို့ကို။ ချိန်းအိန္ဒိယအတွက်သင်လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်အဘယျသို့ဟင်းဖြစ်ပါတယ်၊သန့်ရှင်းသောပွဲတော်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်ပတ်သက်နှစ်ဦးစလုံးအရှေ့တိုင်းနှင့်အရှေ့တိုင်းအသက်ဝိညာဉ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊အမျိုးသားမသိခဲ့ရွာသဘောဆက်သွယ်ရေး။ ရှိပါတယ်လွန်းအများအပြားကြယ္ရာအတွက်ခေတ်မီလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကျော်လွှားရန်ခက်ခဲ။ အစည်းအဝေးတွင်တစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်ရထားစဉ်းစားသည်ထူးဆန်းမှာ ပီးဆယ်ကျော်သက်သူထိန်းချုပ်မှုအဆက်မပြတ်၎င်းတို့၏မိဘများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အချို့လူတစ်ခုကိုရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲမိန်းကလေးအတွက်ညဥ့်အခါကလပ်အသင်း၊ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောရှာကြာအချိန်နှင့်ငွေကို။ အားလုံးမဟုတ်လူအလုံအလောက်ရဖို့ပိုက်ဆံကျွမ်းနှင့်အတူတွေကတော့နှင့်အခြားအလားတူထူထောင်၊ဒီမှာရှိဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပန်းဖြေ၊အရာလူတိုင်းကို ။ နှင့်အစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ကူညီဖို့၊ဗီဒီယိုလိင်ချက်တင်ထံမှမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ ၁၈ အသက်အနှစ်၊ဘယ်အမျိုးသားများကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့လှပၡမ်ားမိန်းကလေးများ။ ချစ်စရာနှင့်ဖြေလျော့မိန်းကလေးများအစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ဖျော်ဖြေဖို့၊အာရုံသူတို့ကိုႏပြင်ပကမ္ဘာ၏။ လျှင်သင်မဲ့အပျင်းခံစားရလျှင်၊သင်လိုချင်တာအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်၊ရုရှားမှသင်တို့ကိုခေါ်ဘိတ် အဆိုပါဧည့်သည်များ။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ၊အဘယ်သူမျှမအပိုငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်ပျင်းစရာကောင်း၊ကိုယ့်အဆုံးမဲ့။ သင်သွားတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပါအ သည်နှင့်အညီသင့်ရဲ့အရသာနှင့်ယခုသင်ပြီးသားဖွင့်လှစ်လောက၏မေတ္တာ၊ကြင်နာမှုနှင့်နားလည်မှု။ အကောင်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်၊အညှို့၊ရိုးသားလန်းစိုပြေနှင့်ရုရှားကစားတဲ့ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အလှအတိုင်းအရသာသည်။ မည်သည့်ယောက်ျားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လွအရသာမတူဖျော်ဖြေ။ ကိုယ့်မိနစ်အနည်းငယ်အကွာကို-နှင့်ယခုသင်တို့ကိုအကြောင်းမေ့လျော့လဲ့ပြဿနာများ၊နေကွယ်ပျောက်ရရန်ပုံမှန်အတိုင်းပျားအရာ၊ခက်ခဲပင်ပန်းနှင့်ငြီးငွေ့။ ငြိမ်ဝပ်၏၊ရော၊ချစ်စရာစကားပြောဆိုချက်နှင့်လှပသောဓာတ်ပုံများသောဖျော်ဖြေနိုင်မည်သည့်ယောက်ျား။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများအလျင်အမြန်သွားသည်ဘုံ၏မေတ္တာ၊ကြင်နာမှု၊အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်သာယာသောအတွေ့ကြုံ။ ကြီ၊နားထောင်ဖို့ဆိုရဲ၏တောင်းဆိုမှုများ၊မည်သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့၊နှင့်ပင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကူအညီပေးအနည်းငယ်အကြံပြုချက်များ။ ပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေရေးအတွက်အားလုံးအလုပ်မဆို ဒါဟာလွယ်ကူဟန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော။ တစ်ဦးငြီးငွေ့ပတ်နှင့်အညှိုးတနင်္ဂနွေလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲအတိတ်၏အရာများအတွက်၊နာကျင်မှုများလာရောက်လည်ပတ်ပဲတစ်နေ့မှာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်၏အသက်တာအမည်မဲ့။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကနေ ၁၈ နှစ်နှင့်အဟောင်းတွေ၊ဒါကြောင့်သင်တွေ့လိမ့်မည်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအခက်အလုပ်များလူငယ်အမျိုးသမီးဘယ်သူ၊ကျွန်တော်စွာနားလည်၏လိုအပ်ချက်များကို။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မိန်းကလေးများနှင့်အတူမြတ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်း၊ခွင့်ပြုသောသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့တစ်ဘုံဘာသာစကားနှင့်အတူလူ။ သောအခါတစ်ဦးတည်းသောအခါ၊သင်လိုချင်အလင်းအစွန်းရောက်အားကစား၊ဒါဟာမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖို့ကြိုးစားပါ။ သင်သွားဖို့ဆိုက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါရှာနှင့်ပူဇော်သင်ဇင်နှင့်ချီ၏အမည်မသိ။ ထိုသူတို့အသီးအသီးရှိမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို၊အကျိုးစီးပွားနှင့်အရသာအကြောင်းတွေ့ရှချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သင်ရှာဖွေနေသည့်အတွက်တိရစာန်များအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်၊ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏမထက်၊သင်ရှာနေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အနီးကပ်မှလူတစ်ဦးအချိန်သွား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ထို့နောက်သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနာရီကို၊အကြောင်းမေ့လျော့သင့်ပြဿနာများနှင့်အခက်အသက်တာ၏။ ချစ်စရာနှင့်ဆန်၊ထောက်ခံပေးခြင်း၊အကြံဉာဏ်အခါနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စာနာလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးနှိုးဆှကခုန်လိမ့်မည်ဟုသင့်စိတ်ဓါတ်များရုတ်သိမ်းပေးရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်နှင့်အသွင်းနှင့်အတူသင့်ကို-မီဘယ်တော့မှမြင်ဘူးပြုသဘောအချိန်လေး။
အကြောင်းသိကောင်းစရာများ၏အကြောင်းသိကောင်းစရာများ:ဘယ်လိုစကားပြောသွားမဟုတ်ပါမပြု နိုင်ငံသားများ၏ခရီး၊အစုံဖတ်ထွက်ရှာဖို့ဒီအကြောင်း: ဥပဒေကဲ့သို့လူတစ်ဦးအတွက်စကားပြောခန်း။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှကြွေးကြော်ကြ"ငါ့ကိုကြည့်ရှု"သို့မဟုတ်"ငါ့အားပြောပြရန်"သတိပြုမိဖို့။ တူညီသောလမ်းအတွက်ဖြစ်၏။ ပင်ပိုကောင်း၊သင်ပွင့်ပြသရှေ့တော်၌စတင်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောနေတာ။ ကြိုးစားမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဖိနပ်။ လူတစ်ဦးသင်အတွက်သတိပြုမိသည်။ မစောင့်ပါနဲ့သူတို့အဘို့အပြောဗြဟံ၊စကားပြောဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အချို့သောလူများမတွက်လေဟာနယ်။ အဓိကအကြံပေးအတွက်အထဲကိုစကားပြောခန်း၊ထိုအခါ နိုင်မှတ်တမ်းအတွက်အားဖြင့်ညာဘက်အပေါ်နှိပ်ခြင်းပ္လိုက္ပါနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း"အ"သူသူရွေးချယ်စရာထွက်ရှာဖို့အသေးစိတ်။ သူသြားကိုဓါတ္ပံုပိုပြီးတန်ဖိုးနှင့်ကိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမပါဘဲတစ်ဦးဓာတ်ပုံ။ အပြင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်တင်ဓာတ်ပုံတစ်၊သင်အမြဲပေါ်တွင်နှိပ်ပါအပြင်တွင်အနိမ့်ညာဘက်ထောင့်၏။ လည်း၊သင်သည်သင်၏ပြောင်တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်အဝတ်အကြာတွင်ထက်(အရာသည်အလွန်မကြာခဏအမှု)၊ထိုအခါလူများရှိသည်သုံးဖြုန်းဖို့အချိန်အများကြီးရှင်းပြမှမိတ်ဆွေဟောင်းဘယ်လိုစကားပြောခန်း၊အဘယ်သူသည်အသစ်တစ်ခုကိုအမည်ပြောင်နှင့်အဟောင်း"ဖမ်းမိညစ်ညူးသံခ်ည္သံေ"။ကောင်းမှတ်ပုံတင်ရန်တစ်ချိန်က၊အကယ်။ တစ်မိန်းကလေးအခါလူငယ်တစ်ဦးမထားတဲ့အတွက်မချရ။ လူငယ်မထားမိန်းကလေးများဖြား။ တစ်ခါတစ်ရံအချို့လူများကရွေးချယ်၊ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်အတွက်စကားပြောကြောင်းသူတို့ကျား၊မအတော်လေးရှင်းပါတယ်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေးများမည်မဟုတ်နှင့်အတူသင်သိလာအောင်နှင့်အပြန်အလှန်။ ဤအမှု၌၊ဒါကြောင့်အကောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အသစ်အမည်ပြောင်အဖြစ်သင်စဉ်းစားပါ။ သူတို့ဆက်သွယ်နှင့်အတူ"စာ"၊တုံ့ပြန်လူတစ်ဦးအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ၊လက်ျာ-ကိုနှိပ်ပါအပေါ်အမည်နှင့်ရွေး"ပုဂ္ဂလိကမည္"။ ကြီးမားသောအရေအတွက်(ထက်ပိုပြီး)၏မေးခွန်းအမှတ်အသားများထိတ်လန့်မှတ်အသား၊သို့မဟုတ်အခြားသင်္ကေတဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ချက်တင်အဖြစ်ဖျက်။ မက်ဆေ့ခ်ျများရေးသားဖို့သာကြီးမားသောအီးမေးလ်သို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျ၏တုိက္ဆုိင္မႈအခွင့်မပေးနေကြတယ်။ အဆိုပါအရာရှိကမြို့တို့၌နိုင်ငံတကာအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ မက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်အခြားဘာသာစကားများမှာမကြိုဆိုပါ။ ရပြီးတာနဲ့ပျင်း၊သင်သည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပြောပြရန်လူတိုင်း၏အပြင်ဘက်တွင်ဖော့ဆို့။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များကိုဖျော်ဖြေဖို့မည်သူမဆို။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊မိန်းကလေးငယ်များလိုအပ်ချက်တင်(ကောင်းစွာ၊သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်)နှင့်ယောက်ျားလေးများအလိုရှိသည်ရီးရဲလ်လိင်(ကောင်းစွာ၊သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်)။ နားလည်ရန်ကြိုးစားပါမျက်နှာကိုဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏။ ကြမ်းပြင်တွင်မပါဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာပေးစာ၊မုသာစကားကိုအိပ်ရာပေါ်။ ဘယ်လိုမှထားခဲ့တဲ့အမည္သူတစ်ဦးအတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ဒါပေမယ့်မလောလောဆယ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်:ရှာတွေ့သောလင့်ခ်အတွက်အနိမ့်ညာဘက်ထောင့်အချက်တင်"ပြင်ပရိုဖိုင်းနဲ့ပရိုဖိုင်"၊ပြီးတော့ပေါ်တွင်နှိပ်ပါလင့်"ေရာ"အတွက်။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်။ စစ္မစံသတ်မှတ်ချက်၌လက်ဝဲကော်လံ၊၊ရှာ၊အမိန့်မိန့်နဲ့အသစ်ခင္း(မက်စ်။ ႏွင့္)အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားနည်းပညာများအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏။ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ရန်သဘောတူကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သောအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်။ ကျနော်တို့အနီးကပ်ကိုရှာဘို့။ စစ္မစံသတ်မှတ်ချက်၌လက်ဝဲကော်လံ၊၊ရှာ၊အမိန့်မိန့်နဲ့အသစ်ခင္း(မက်စ်။ ႏွင့္)အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားနည်းပညာများအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏။ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ရန်သဘောတူကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ထိုမိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူသူတို့ရဲ့အသစ်ဖုန်း၊ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီးသူတို့ကိုနေစဉ်သူတို့အဘို့ရှာကြသည်အချို့သောခေတ်မှီအဝတ်။ ဤဓါတ်ပုံလည်းအမြင်အပေါ်အချို့သောလူမှုကွန်ယက်နှင့်အဘို့တောင်း သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမဲ။ အောင်လှပသောပေါင်းစပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အတွက်ဗီရို။ ဘယ်လိုအကြောင်းတစ်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအစိမ်းရောင်တီရှပ်နှင့်အတူအဖြူအစက်နှင့်အတူတွဲပန္းေရာင္ေဘာင္းဘီပန္းေရာင္ေနကာမ်က္မွန္? ကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးကြော့အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံအပေါ်ပခုံးနှင့်အတူငယ်မောင်းထုတ်အပေါ်နှလုံးနှင့်မောင်းသောအထည်လေးအကြောင်းကြီးစွာကြည့်ရှုမည်နှင့်အတူမောင်းသောအထည်လေးပါ။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၊တာ္ၿနှင့်အေးမြအရှာဖွေနေ၊တစ်ဦးအဖြူဝတ်စုံနှင့်အတူအချို့သောအနက်ရောင်အစင်းထိပ်ပေါ်မှာကြီးစွာကြည့်ရှုမည်နှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲ၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူကောင်းလေးပေါ်သူတို့ရဲ့အဆစ်။ သင်ပျော်စရာတွေအများကြီးကစား"နယူး"။ ကျနော်တို့ဝတ်စုံဒီလို၊ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူကြ၏မိမိကိုယ်ကိုမိမိ၊ဥပမာအားအောက်ပါအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးငယ်'ဂိမ်းများအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်သောမိန်းကလေးများလည်းလိုအပ်ဂိမ်းများ၊နှင့်ဤသူတို့ကိုပေး။ မိန်းကလေးများအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဖိတ်ခေါ်သင်၏မိတ်ဆွေများပါတီမှမိန်းကလေးများဂိမ်းသို့မဟုတ်ပဲကစားတည်း။ အချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးစာရင်းအသစ်ပြင်၊အဆင်ရန်ကမ်းလှမ်းနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ် အတွက်အပြောင်းအလဲ၏အပြင်။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားမျိုးကွဲ၊အကြံပြုစာများ၏လိမ္မော်ရောင်သည်မီးမောင်းထိုးပြ။ ပထမ-ကွဲ၊သို့သော်၊အမှလုိုက်။ထောက်ခံချက်။ အကြံပြုထား၏စာလုံးပေါင်းမှားမှအကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာအပျိုသို့မဟုတ် နှင့်အမြဲလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကောင်စီ၏အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းသည်။ အသေးစိတ်အတွက်၊ရည်ညွှန်းသည်။ သင်ရှိသည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းဖို့အပလီကေးရှင်း၊အတတ်သို့မဟုတ်အနက်အဓိပ္ပာယ်? ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ တစ်ဆူလာဝေါဟာရများကိုစုဆောင်းခြင်းများမကြာခဏဘာသာသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း၏လူကြိုက်အမှားအယွင်း။ ယခုအသုံးပြုမှုများအတွက်ရှာဖွေအဘိဓါန္ညာဘက်ထိပ်မှာအကွက်သို့မဟုတ်အထက်ဂူရှာ။ နှင့်အတူထုံးစံဂူရှာတစ်ခုလုံးကိုအဝက်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေ။
ငါတို့ပြုသမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးလုပ်ချင်ရှာဖွေရန်သင်၏ခင်ပွန်း။ ငါတို့သည်ခေါ်မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူများနှင့်၊အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော၊နှင့်ထိုနည်းလမ်းများကိုနှင့်နည်းလမ်းများ။ ကျနော်တို့နံနက်ယံ၌ထနိုးအသောက်ကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်။ ကျွန်တော်အလုပ်သွား၊ကျွန်တော်သွားကောလိပ်၊သို့မဟုတ်ကျွန်တော်မလုပ်မှာအားလုံး။ ရပ်မှာမျဉ်းကြောင်း၊အလုပ်ဖုန်း၊အလုပ်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမှုများကိုနေ့တိုင်းနှင့်အရှာအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းကကျနော်တို့အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောအချို့လူများကချင် တက်ရွှေ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ လူတချို့၏အိပ်မက်ကားအသစ်။ လူတချို့ကသောက်ရေ၊လမ်းလျှောက်၊နှင့်မီးမရှို့ရ။ တစ်ယောက်စတစ်မိသားစုနှင့်တစ်ဦးသား။ နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်း၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးအတွက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ။ သို့သော်ထိုတစ်ခုတည်းသောအရာစပ္ထားပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့။ အပေးတော်မူမည်သူကိုအထူးခြင်းနှင့်သာအရေးအဓိပ္ပာယ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖြစ်ပျက်သာနေ့တိုင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းခဏခဏမှာဒီနေ့။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနိုင်သူသာအကြောင်းပြချက်မှအပြုံး၊ဒါပေမယ့်လည်းဖြည့်စွက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားတဲ့အလင်း၊နွေးထွေးမှုနှင့်မိဿဟာယ။ လူလိုအပ်သောသူကဲ့သို့လေ။ သင်နဲ့။ သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘယ်သူ၏အဆင့်၊အသက်ရှူလက္ျဖင္၊ရယ်မောခြင်းနှင့်အသံများမှသင်ယူနိုင်ကြတဲ့လူတွေသန်း။ အဘယ်သူနေမည်ဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်အဖြစ်အသက်တာကိုယ်နှိုက်သည်။ နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်ရန်:အချစ်လူတစ်ဦးမှလာမယ့်၊နှင့်အတူအဘယ်သူသင်ချင်ကြပါဘူးအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန် အသက်တာ၏။ သူမလိုအပ်ပါဘူး။ အလင်းသည်သင်တို့တွင်။ အစဉ်အမြဲ။ ကျွန်တော်တို့ရှာနေကြရှာ။ ရှာ။ မကြာခဏကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့စည်းရုံးကိုယ်ကိုကိုယ်အသင့်ကြောင်း အဘယ်သူမျှမလိုအပ်နေပါသည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ပထမဦးဆုံးအရာငါတို့မြင်နှင့်အိပ်မက်၏၊အကြင်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်လွဲမသွေ၊အရာအားလုံးအမှားဖြစ်မကြာမီသူတို့ပြိုကျ။"သူသည်ကြောက်မက်၊ဆွ။ သူမအိပ်မက်မှာအားလုံး။"ဒါပေမဲ့လည်းစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှင့်အခြားသူများအရာအားလုံးကိုအမြဲမှန်သည်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌၊ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းအဘို့အကြည့်အတူတူပါပဲ။ လူ။ လည်းမယုံဘူး၊အဘယ်ကြောင့်မေ့လျော့တော်။ တေန့ပဲလိုတယ္။ ထိုနှစ်ပေါင်းအနားမှာရှောက်သွားအချိန်လေးတွင်၊နာရီ၊ရက်၊ည။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်တစ်ဦးသည်လူ။ ဘဝအဓိပ္ပာယ်။ သင်အသက်တာရှိသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်သည်ကိုအမှန်မှာ၊အခုအချိန်မှာ။ ယူတဲ့အဆင့်ဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်၊ယနေ့ယခု၊၏ထိပ်ပေါ်တွင်အခြား။ အီးမေးလ်ရေးသားေပးပါနိမိတ်လက္ခဏာကိုသတိပြုမိခံရဖို့။ အဲဘာမှမဖြစ်နိုင်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကအဘို့အသင့်အသက်တာ၌ကြိုးစားမှအလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်၊မခွဲခြားဘဲအ နှင့် ။ ဟုမထင်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပြော၊ဒီသင်၏အသက်တာဖြစ်ပါသည်၊သင်အခွင့်အရေးရှိရန်တည်ဆောက်လိုပါသည္။
မှချိန်းတွေ့နှင့်စကားပြော ၁ ဝင်အခမဲ့ပါဘဲ။
Свабодныя сустрэчы з людзьмі - відэа-знаёмства
အြန္လိုင္း အဝတ်အချည်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ အထီးကျန်သလိုတွေ့ဆုံရန် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့ ချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမိန်းကလေးများ စကားပြောမပါဘဲဒီယို ဗီဒီယိုအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာ တွေ့ဆုံရန်အဘို့လိင် ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အြန္လိုင္း